Nhau - Kuvandudza kwekupisa kurapwa maitiro eakakwira giredhi simbi simbi 23MnNiMoCr54
Round simbi yekubatanidza cheni kugadzira kwe30+ makore
(yakakomberedza simbi yekubatanidza cheni inogadzira)
Fonera Tsigiro + 86-21-31300975
Tsigiro yeemail info@scic-chain.com
SCIC Round Simbi Batanidza Chain
Musangano uye Zvivakwa Garari
Yemhando Policy, Mission & Maitiro
Hunhu Kudzora Mune Chain Kugadzira
denderedzwa yekubatanidza cheni
flat link cheni
Giredhi 80 (G80) yekusimudza cheni
Giredhi 80 (G80) ketani zvidhindo
Giredhi 100 (G100) inosimudza cheni
Giredhi 100 (G100) Chain Slings
conveyor nemaketani erevheta
Crosby Kusimudza Zvisungo
AID Zvicherwa Zvidhina
Zvikamu zveCheni Elevator & Conveyor
Injiniya uye R&D
Nhau uye FAQs
Tsigiro uye Bata
Kuvandudza kwekupisa kwekurapa maitiro eakakwira giredhi cheni simbi 23MnNiMoCr54
Kupisa kwekupisa kunoisa mhando uye mashandiro eround link cheni simbi, saka zvine musoro uye zvinoshanda kupisa kurapwa maitiro inzira inoshanda yekuona kugadzikana kwakanaka kwesimbi-yegiredhi cheni simbi.
(1) Muchikamu chekutanga chekugadzira yakakomberedza simbi yekubatanidza cheni, iyo nzira yekurapa yekupisa inopenya yevira, senge muhotera muchoto choto. Ive convection vira rinoshandiswa pakutsamwa. Iyi nzira inoda refu yekudziya nguva uye yakaderera kushanda, mamwe ayo anodawo marefu ekudhonza cheni. Muchikamu chese chekupisa checheni, nekuda kweiyo yakakwira mwero wepasi peiyo oxidation, zvinonetsa kuwana tsanga dzakanaka kwazvo dzeaustenite, dzinozopedzisira dzaendesa kuhunhu hwakazara hwecheni yesimbi yekubatanidza cheni yakaburitswa panguva iyoyo. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwehunyanzvi hwekurapa tekinoroji, iyo yepakati frequency induction yekupisa nzira yakagadziriswa mune inotevera nhanho inoshandiswa zvakanyanya, uye hunhu hwekurapa hunhu hweyakatenderera simbi yekubatanidza cheni yakagadziridzwa zvakanyanya.
(2) Chain tempering tekinoroji, iko kwekutanga kushandiswa kweunifomu tembiricha tempering, yazvino. kuvandudzwa kwekugadzikana kwakanyanya ndiyo yepakati frequency kusiyanisa tembiricha tempering uye yunifomu tembiricha tempering pamwe nematanho tembiricha tempering. Izvo zvinonzi yunifomu tembiricha tembiricha ndeye kufunga kuti kuomarara kwechikamu chega chega checheni chinongedzo chakafanana mushure mekupisa, asi cheni yekubatanidza inoitwa nekumonera. Kana iyo tembiricha yekupisa yakanyanya kuderera, kubatana kwekusungira kuri nyore kutsemuka, uye necheni yekubatanidza kuomarara kwakakwirira, kukakavadzana pakati pekunze kweruoko rwakatwasuka uye pakati pekuchinja kweanotakura zvakare kuri nyore kwazvo kuburitsa kutsemuka. Kana iyo tembiricha yekupisa iri pasi, kuomarara kwecheni kunogona kuderedzwa. Kusiyanisa tembiricha tempering inotora kupisa induction, iyo inokodzera kwazvo mamiriro ekupisa emaketani, ndiko kuti, pamusoro peketani fudzi rine kuomarara kwakanyanya uye kupfeka kuramba, uye ruoko rwakatwasuka rine hushoma hushoma uye kuomarara kwakanaka. Iyi nzira yekurapa yekupisa inogona kuvandudza zvakanyanya mhando yecheni.
Maitiro ekurapa kupisa kwe 23MnNiMoCr54 yakakwira giredhi cheni simbi
Iyo yepakati frequency induction yekupisa nzira ine hunhu hwekukurumidza kupisa kumhanya uye kushoma oxidation, iyo isingangowirirana neazvino kugadzirwa kwekugadzirwa, asi zvakare inosvika kune mamwe maindekisi eround simbi yekubatanidza cheni simba uye kuomarara. Iyo chaiyo nzira yekutora yepakati frequency induction kupisa kurapwa ndeye kutora iyo yepakati frequency induction inopfuurira choto cheakakwira-simba induction yekupisa michina kutanga, kuti uone kupatsanurwa kweyaka tenderera simbi yekubatanidza cheni kudzima uye tempering. Iko kudzimisa uye kupisa kupisa pamberi peketani isati yaiswa mumoto zvinonyatso kudzorwa neiyo infrared tembiricha kuyera. Kuburikidza nemuyedzo mukuita, zvinowanikwa kuti iyo inotonhorera svikiro yekudzima uye tempering imvura, Iyo tembiricha yemvura inodzorwa pazasi pe30 ℃. Simba rekudzimisa kupisa rinofanira kudzorwa pakati pe25-35kw, cheni yekumhanyisa inofanirwa kudzorwa pa8-9hz uye tembiricha inofanirwa kudzorwa pakati pe930 ℃ -960 ℃, kuitira kuti kuomarara kweyakaomeswa denderedzwa neketani inogona kusangana nezvimwe zvemhando zvinodiwa . Iyo yekudziya simba ye tempering maitiro inodzorwa pa 10-20kw uye tembiricha inodzorwa pa500 ℃ -550 ℃. Iyo cheni yekumhanya inochengetwa pakati pe15 ne16Hz.
Post nguva: Jun-15-2021
Hatimire pakuve inotungamira yakakomberedza cheni yekugadzira cheni muChina (iine gore rega kupa pamusoro pe10,000T), asi namatira kune kusingamise zvisikwa uye hunyanzvi.
Kuvandudza kwekupisa kurapwa maitiro ...
Sumo pfupi yemigodhi kutenderera chinongedzo ...
Yakajairwa Kupenda, Electrostatic pfapfaidzo jasi ...
Grade 100 chiwanikwa simbi cheni
SCIC migodhi emaketani ekuendesa